नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भारतीय सदगुरुसँग छलफल नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भारतीय सदगुरुसँग छलफल
नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भारतीय सदगुरुसँग छलफल
नेपाल एशियाको स्वीजरल्याण्ड, पर्यटबाटै समृद्धि सम्भव छ : सदगुरु
भारतीय प्रख्यात योग गुरु सदगुरु र नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मी बीच नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका विषयमा शनिबार छलफल भएको छ । एकसाता अघि नेपाल आउनु भएका सदगुरुसँग भएको छलफलमा नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनका विभिन्न विषयमाथि छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा सदगुरुले नेपाल एशियाको स्वीजरल्याण्ड भएको चर्चा गर्दै नेपालको समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रकृतिको अनुपम उपहार भएको र स्वर्ग यही नै स्वर्ग रहेको धारणा राख्नु भयो ।‘ ‘नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाको देश हो । नेचर, कल्चर, एडभेन्चर यहाँ नभएको के छ ? आवश्यक छ त केवल यसको व्यवस्थापन र यसैबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने चिन्तन । त्यो चिन्तन उजागर हँुदाको दिन नेपालको समृद्धिलाई कसैले राक्न सक्दैन । ’ उहाँले भन्नु भयो ।
नेपाल विश्वका अरु देश जस्तो नभई अलौलिक आनन्द प्राप्त गर्न सकिने देश भएकोले यहाँको मौलिकतालाई जर्गेना गर्दै पर्यटन विकास गर्नु आजको आवश्यक्ता भएको भएको बताउनु भयो । उहाँले योजनाबद्ध विकास विना दिगो विकास सम्भव नभएको धारणा राख्दै नेपालका मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै योजनावद्ध विकासमा लैजान सुझाव दिनुभयो । आउने दश वर्ष भित्रै नेपालको पर्यटनलाई जिडिपीको करिब ३० प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसको अपार सम्भावना नेपालमा छ तर नगरिए भने त्यो आउने पुस्ता माथीको अपराध हुने छ । यस्तै नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्न पनि जरुरी छ । ’ उहाँले भन्नु भयो ।
भेटमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा.धनन्जय रेग्मीले कोभिडकै बीचमा सदगुरुको नेपाल भ्रमणले नेपालको पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक समानताले गर्दा नेपाल र भारत बीच सहकार्य गर्न सके दुवै देशले पर्यटनबाट फाइदा लिन सक्ने बताउनु भयो । यस्तै उहाँले नेपालमा धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन लागि सदगुरुहरुसँग सहकार्य गर्न पर्यटन बोर्ड तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले खप्तड जस्ता ठाउँमा सदगुरुलाई योगा तथा मेडिटेशनका लागि काम गर्न समेत आव्हन गर्नु भयो । सदुगुरु नेपाली भूभाग लिमि भ्याली हुँदै नेपालबाटै कैलाश मानसरोवरको यात्रा गरी काठमाण्डौं फर्किनु भएको हो । उहाँसँगै विभिन्न देशका उहाँका अनुयायी तथा सहगोगी गरी करिब चालिस जना भन्दाबढिको समुह नेपालमा रहेको र उहाँहरु केही दिन नेपाल मै रहने पर्यटन बोर्डका सञ्चार परामर्शदाता टीपी भुसालले जानकारी दिनुभयो ।